Wholesale 70cl Mutsipa Wakareba Round Whisky Bottle Corked
Tanga chigadzirwa sumo Wholesale 70cl Long Neck Round Whisky Bhodhoro Corked. Iyi modhi yebhodhoro ine mutsipa wakareba nekork uye mamwe macaps. Iro bhodhoro rakagadzirwa ne super flint girazi, ine yakasikwa cork, polymer uye synthetic stoppers.
Tanga chigadzirwa sumo Wholesale 70cl Long Neck Round Whisky Bhodhoro Corked. Iyi modhi yebhodhoro ine mutsipa wakareba nekork uye mamwe macaps. Iro bhodhoro rakagadzirwa ne super flint girazi, ine yakasikwa cork, polymer uye synthetic stoppers. Isu tinobvumawo mabhodhoro egirazi ewhisky. Mune ino tsika yegirazi sevhisi yebhodhoro, unogona kugadzirisa akasiyana mabhodhoro egirazi maumbirwo, akadai sedenderedzwa, sikweya, streamline, dehenya, etc. Mabhodhoro egirazi akasiyana ane 50ml, 100ml, 250ml, 350ml, 500ml, 700ml, 750ml, 1000ml, 1000ml, zvichingodaro. Isu tinobvumawo customized private label uye logo services.Chaunoda ndicho chatinogona kupa!
Kana iwe uchifarira yedu 70CL yakatenderedza whiskey bhodhoro ine cap, ndapota taura nesu. Kana iwe uchida kugadzira mabhodhoro egirazi, ndapota taurawo nesu. Isu tinofara kugamuchira kubvunza kwako kune akanakisa whiskey mabhodhoro egirazi.
Zvinokonzera uye zvinogadziriswa zvekukanganisa pasi pemabhodhoro egirazi
1.Kupwanya pasi pebhodhoro (kuputika pasi). Kune kuputika mukati memakona akakomberedzwa enzvimbo yekubata pazasi pebhodhoro. Droplet tembiricha yakadzikira. Mechi isina kufanira pakati pepasi nekugadzira kufa, kugadzira kufa hakuna kugadzikana kuvhurika. Mold pasi inotonhora zvakanyanya kana kupisa zvakanyanya. Overblown air pressure. Pane mafuta pandiro yemhepo inotonhorera, uye bhandi remambure ekudyisa rinotonhora zvakanyanya. Bhodhoro rakaramba riri pa cooling plate kwenguva yakareba.
2.Burrs pabhodhoro pasi seam. Tembiricha yekudonha yakakwira zvakanyanya uye chimiro chekutanga chakapfava. Pasi pekufa uye kufa kwekugadzira zvakagadzirirwa girazi rakaputsika. Kureba kusina kunaka kwepasi mold. Pasi pefasi haipindirani zvakanaka nekufa kwekugadzira.
3.Huremu hwepasi dzakatetepa zvinhu madonhwe hahuna kukwana. Tembiricha yekudonha yakadzikira. Iyo yekutanga mold yakaipa muchimiro. Kufa kwepuraimari kunotonhora zvakanyanya, tembiricha yekutanga yakadzikira. Zvinotora nguva yakareba kuvhuvhuta. Kurova kwakazara kunotanga kare. Nguva yekudziisa ipfupi. Iko kukurumidza kwekuchinja kwe pliers hakuna kunaka.
4.Tembiricha yepasi gobvu zvinhu zvakanyanyisa, uye madonhwe emidziyo anorema zvakanyanya. Kupisa nguva yakarebesa kana fomu yekutanga yakapfava. Iyo yekutanga mold yakaipa muchimiro. Kupisa kwekutanga mold kwakanyanyisa. Backblow pressure yakanyanya kuderera, nguva haina kukwana. Iko kurova kwakanaka kunotanga kunonoka.
5.Kusvika pasi. Kukora kwebhodhoro kuzasi hakuna kuenzana kana kuti rimwe divi rakakora uye rimwe divi rakatetepa. Tembiricha yekudonha haina kufanana. Izvo zvinhu hazvina kutwasanuka, izvo zvinhu zvinodonha panzira yezvinhu friction zvakanyanya. Kusakwana kumashure. Iko kushanduka kwekumhanya kwepliers hakuna kufanira. Iyo yekutanga mold chimiro haina kunaka. Mold tembiricha haina kufanana. Kugadziriswa kusina kunaka kwe mold bottom urefu. Kugadzira kufa kwakavharwa zvishoma nezvishoma kana zvakanyanya. Kupa kwekutanga hakuna kunaka.
6.Kurova musoro imprint offset. Chitambi chemhepo chakarerekera padivi kubva pakati pepasi pebhodhoro. Tembiricha yekudonha yakanyanya kana kusaenzana. Nguva yakarebesa kana kupfupika kudzoreredza nguva. Flip nekukurumidza kana kunonoka. Pakutanga kwe mold Bad type. Mapiritsi maviri haasi mundege imwe chete, uye kuendesa kwekutanga hakuna kunaka. Kufuridzira kumashure hakuna kutwasuka.Kugadzira kufa kuchivhara nekukasira kana kunonoka. Tichateerera zvakanyanya kumatambudziko aya kudzivirira njodzi dzechigadzirwa.
Zvakapfuura: Tsika 750ml700ml375ml Frosted Glass Bottle Wholesale For Spirit
Zvinotevera: Mabhodhoro egirazi akaita sedehenya
700ml750ml Round Empty Whisky Mabhodhoro
China Kugadzira 500ml Vintage Blue Girazi Liqu...